झु’टो बोल्ने बा’नी छ ? एकपटक अवश्य प’ढनुहोस् : – Sadhaiko Khabar
झु’टो बोल्ने बा’नी छ ? एकपटक अवश्य प’ढनुहोस् :
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष २९, २०७८ समय: ८:२२:२८
हिन्दूहरुको पवित्र धर्मग्रन्थ मानिएको ग’रुड पु’राणमा नर’कका बारेमा सवि’स्तार व्या’ख्या गरिएको छ । पा’प गरेका मानिस न’रक जाने धार्मिक विश्वासम हि’न्दू धर्मावलम्बीहरुमा रहँदै आएको छ । गरुड पुरा’णका अनुसार, फरक किसिमका पा’पलाई फरक किसिमका न’रक प्राप्त हुन्छ । जसमा झु’टो भा’षण गर्नेहरु कुन न’रकमा पुग्छन् भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ ।
पुरा’नका अनुसार, झु’ट भा’षण गर्ने राजनेताहरु तप्तकुम्भ नामक न’रकमा जान्छन् । यो न’रकको चारै तिर फला’मको धुलो सहित झल्कि’रहेको तेलका बि’शाल घ’डाहरु हुन्छन्, य’मराजका दू’तहरुले पा’पीजनहरुलाई उ’धमुन्टो पारेर त्यसैमा हा’ली दिन्छन र ती महापा’पिहरुको मा’सु र छा’ला छु’ट्याइन्छ । बे’सहरा पा’पीहरुलाई त्यहीँ गि’द्दहरु ठुँ’ङ्छन र चुँ’डेर उडछन् । पा’पीहरु पुनः त्यही तेलको कराहीमा ख’स्छन् ।
यो पनि :शास्त्र अनुसार, हामीले सुत्नु भन्दा अगाडी जहिल्यै विचार पु¥याउनुपर्छ । ग’लत स’मयमा सु’त्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई बेफा’ईदा पु¥याउनुको साथै हा’निकारक मानिन्छ । यी हुन् सु’त्नै नहु’ने तीन समय
घाम झुल्किएपछि= शास्त्र अनुसार, घाम झुल्किएपछि पनि सुतिरहनेसँग धनकी देवी लक्ष्मी रि’साउँछिन् । त्यसरी सु’त्ने ब्यक्तिहरु जति पैसा भएपनि सन्तु’ष्ट रहन सक्दै’नन् । मा’नसिक तना’व हुने मात्र हो’इन, स्वास्थ्य पनि राम्रो हुँ’दैन ।
मध्यान्नको समय= मध्यान्नको समयमा पनि कहि’ल्यै सुत्नु हुँ’दैन । यसले स्वास्थ्यमा नका’रात्मक प्र’भाव पार्छ । विशेषगरी दिउँसोको खानापछि सुत्ने मान्छेमा भुँ’डी बढ्ने सम’स्या देखिन्छ । शात्र अनुसार मध्या’न्नमा सुत्ने मानिस रो’गी हुन्छ ।
घाम अस्ता’उने बेला= घाम अस्ताउने बेला पनि कहिल्यै सु’त्नु हुँ’दैन । शास्त्र अनुसार घाम अस्ता’उने समय भनेको पुजा अर्चना गर्ने समय हो । वि’नाकारण यो समयमा सुत्ने व्यक्तिले कहि’ल्यै सफ’लता पाउन सक्दैन ।
यो पनि : हि’न्दु धर्मवालम्बीहरुका लागि शि’वलिंगको विशेष महत्व छ । शि’वलिंग भनेको भगवान शंकरको प्रतिक मानिन्छ । धर्मसास्त्रका अनुसार लिं’ग भनेको श’क्ति हो । त्यसलैले उत्पादक श’क्तिको चिन्हको रुपमा लिं’गको पूजा गर्ने गरिन्छ ।
लिं’गको पूजा गर्नाले सबैको पूजा हुन्छ भन्ने विश्वास राखिन्छ । शिवलिंगमा यो’निलाई मात्री श’क्तिको प्रतीक मानिन्छ । शि’वलिंगले पूरा ब्रह्माण्ड पु’रुष र महि’लाको ऊ’र्जाले बनेको हो भन्ने इंगित गर्दछ ।
लिं’ग पुजा गर्नुका केही कारण यस्ता छन
शि’वलिंग मान्यताको अनुसार, लिं’ग एउटा बिशाल लौकिक अ’न्डाशय हो जसको अर्थ पूरै ब्रह्माण्डको प्र’तीक हो । शि’वलिंग र त्रिमूर्ति – त्रिमूर्तिको मतलब हो ब्रह्मा, विष्णु र महेश यसलाई अझ राम्रोसँग जान्ने हो भने यी तीनले सत्य, ज्ञान र अनन्तलाई दर्शाउँछन् ।
शि’वलिंगका बारेमा दुई एक पटक ब्रह्माजी र विष्णुजीबीच वि’वाद उत्पन्न भयो । ब्रह्माजीले सृष्टिकर्ता भएको कारणले श्रेष्ठ भएको दा’वी गरे र विष्णुले सृष्टिको पालनकर्ता भएको कारणले आफू श्रेष्ठ भएको दा’वी गरे । त्यसपछि त्यहाँ एक विशाल लिं’ग उपस्थिति भयो र दुवै देवतामा सह’मतिले यो निश्च’य गरियो कि जसले यो लि’ङ्गको समा’प्ती बारे पहिला प’त्ता लगाउछ त्यो नै श्रेष्ठ हुनेछ । दुवै जना विप’रित दि’शामा शि’वलिंगको समा’प्ति खो’ज्न निक्लिए ।
तर उनीहरुलाई कुनै समा’प्ति मि’लेन यसले उनीहरुमा यो ज्ञात हुन्छ कि शि’वलिंग नै अनन्त’काल हुन् । शिवलिंगको उत्पत्ति यसको कुनै रंग हुँ’दैन । यो जुन रंगको स’म्पर्कमा आउँछ त्यही रं’गको हुन्छ । शि’वलिंगको पूजा ध्यान साधनाको लागि हो र यसलाई नि’र्गुण ब्रह्मा पनि भनिन्छ । सका’रात्मक सोच बा’ट ।